Fiovan'ny toetrandro, fizahan-tany ary COVID-19 raha ny filazan'ny Prof Geoffrey Lipman, SUNx
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Belzika » Fiovan'ny toetrandro, fizahan-tany ary COVID-19 raha ny filazan'ny Prof Geoffrey Lipman, SUNx
Vaovao Mafana Belzika • Vaovao • Podcasts • Tourism
Ity dia fifanakalozan-kevitra mendrika ny miaraka amin'ny Profesora Geoffrey Lipman momba ny fahafahan'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahantany mamolavola ny fandinihana ny fiovan'ny toetr'andro.
Henoy ny podcast:
eTurboNews Fantany fa ny fiovan'ny toetrandro dia manana anjara toerana amin'ny fananganana indray ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahantany aorian'ny COVID-19. Manana fotoana izay matetika tsy raharahina.
Ny profesora Geoffrey Lipman no miandraikitra ny Tambajotra SUNx ary miresaka momba izany fotoana izany miaraka amin'ny eTurboNews amin'izao fotoana izao.
SUNx - Tambajotra matanjaka matanjaka - dia rafitra vaovao ho an'ny toeran'ireo mpizahatany sy ny mpandray anjara amin'ny fananganana toetoetran'ny toetrandro mifanaraka amin'ny tanjon'ny Fifanarahana Paris amin'ny alàlan'ny "Travel Friendly Travel."
Tsy misy atahorana ho an'ny zanak'olombelona tokana noho ny fiovan'ny toetrandro - izany eXzava-dehibe.
Hifantoka amin'ity zava-misy ity ny SUNx ary hanome eXfanovana ny vahaolana maranitra, ny fitaovana ary ny loharanon-karena hanampiana ireo vondrom-piarahamonina sy ireo mpizahatany mpizahatany.
SUNx eXNy fanovana dia manana singa fototra telo:
SUNx Centres - Ivotoerana fanaovana fikarohana sy fanavaozana ny toetr'andro sy herin'ny masoandro
Fifandraisana SUNx - Sehatra teknolojia hanaraha-maso sy famakafakana ny angon-drakitra mahazaka toetr'andro
Fiarahamonina SUNx - Fananganana fahaiza-manao, fanabeazana ary fampiroboroboana ny kolontsaina amin'ny alàlan'ny Travel Friendly Travel